Shina sy Makedonia: Tezitra Ny Mpiserasera Sinoa Noho Ny Fanomezana Fiara Mpitatitra Mpianatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Desambra 2011 3:33 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Nederlands, Français, Español, македонски, English
Niteraka fahatezerana teo amin'ny mpiserasera Sinoa ny vaovao momba ilay fanomezan'ny governemananta Sinoa Fiara mpitatitra mpianatra miisa 23 ho an'ny Repoblikan'i Makedonia tamin'ny 25 Novambra 2011 lasa teo, satria mbola ao anatin'ny fisaonana ny sinoa noho ny fahatesana ankizy miisa 19 tamin’ ilay lozam-pifamoivozana nitranga tao amin'ny faritany Gansu ny 16 Novambra 2011.
Loza nateraky ny fiaram-pitaterana mpianatra tao Gansu
Ity lazaina ho “mpitatitra mpianatra” niharan-doza tao Gansu, dia fiara ahitana seza 9 tany am-boloahany saingy novaina hahazaka ankizy mpianatra 64 kosa izany taty aoriana. Nandritra ny loza, tafatsofoka tao ambanina kamiao ilay fiaram-pitaterana mpianatra ka nitarika fahafatesan'olon-dehibe 2 sy ankizy mpianatra madinika 19. Tsy loza kisendrasendra izany satria efa olana hatramin'izay ao Shina ny fahabetsahan'ny olona entina ao anaty fiaram-pitaterana mpianatra. Ity manaraka ity dia raki-kira, Blood Stained School Buses (nihoso-drà ny fiara-pitatitra mpianatra), notontosain'ny mpisera Youtube Angelcat1921 fotoana fohy taorian'ny loza tao Gansu:
Navoakan'i Jing Gao avy ao amin'ny blaogy minisiteran'ny Tofu ny fihetseham-pon’ny mpiserasera Sinoa mikasika ny loza niseho, ary nadikany tamin'ny fiteny hafa izany:
畅游山海间：Tao Shina, 99.9% ny ankizy mandray fiaram-pitaterana mpianatra dia zaza madinika an'olo-tsotra avokoa. Ny fiaran'ny governemanta kosa na fiara manokana mihitsy no mitatitra hatrany ny zanaky ny mpanao politika sy ny mpiasa ambony ao amin'ny fitondrana ka azo antoka tsara ny fiarovana azy ireo. “fahalehibiazana, voninahitra ary fahamboniana” ho azy ireo izany. Ary tombotsoa amin'ny sosialisma ho an'ny Sinoa.
晚霞中的骊歌: Laharam-pahamehana ho an'ny firenena, ny fiaraha-monina ary ny governemanta miaro ny vahoakany ny fiantohana ny fiarovana ny ankizy. Raha tsy voahaja izany laharam-pahamehana izany, tsy inoako raha mbola mendrika ho tafajanona eto ity firenena, fiaraha-monina ary governemanta ity. Huh huh!
高劲涛: Tsy afaka mba miaro ny ankizy madinika ao aminy akory ny firenena manam-bola hodorana. Inona no tanjony amin'ny fandefasana zana-bolana? Seza ho an'ny ankizy ao anaty fiara, tsy resahina intsony ny fiara mpitatitra mpianatra, izay mbola tsy vita ny famahana ny olana. Efa topondaka manerantany amin'ny famokarana fiara ny firenentsika! Toa tahaka ny manelingelina ity lahatsoratra bilaogy fohy ity.
Nanolotra fiara-pitatitra mpianatra 23 ho an'i Makedonia ny governemanta Sinoa. Sary avy amin'ny tranokalan'ny governemanta Masedonia
Fiaram-pitaterana mpianatra natolotra an'i Makedonia
Mbola ao anatin'ny hatezerana tanteraka ny vahoaka noho ny tsy fahaizan'ny governemanta miaro ireo taranaka handimby ity firenena ity, mampitombo ny loza indray ny tetikasa nataon'ny fanjakana mpanatanteraka amin'ny fanomezana fiara mpitatitra mpianatra harifomba 23 ho an'i Makedonia.
Mpisera Weibo Wu Shuping mitolona amin'ny fanivanana ny sehatra Sina ary nanohy namoaka foana ny hafany feno hatezerana:
吴淑平: Namoaka indray ny hafatra efa voafafa: Nandà tsy hividy fiara mpitatitra ho an'ny mpianatra eto amin'ny firenentsika manokana, nanolotra fiara mpitatitra 23 ho an'ny Makedonia [ny governemanta] raha toa ka mbola mafy ny fahatsiarovana ny fahafatesan'ireo zaza madinika 20. Hoy ny Ambasadaoro Sinoa naneho hevitra: nahitana seza 35 ilay fiara, nanaja ny fepetra rehetra ilaina – ny fiarovana mandeha ho azy (automatique) amin'ny varavarana, ny famonoana afo sy ny fehikibo fiarovana isaky ny seza. Tsy afaka hizaka izany intsony aho, raiso ity: Fako ny reninao [ompa]! !
Christopher Jing nanazava bebe kokoa ny anton'ny nandrasain'ny governemanta izany fanapahan-kevitra izany:
克里斯托夫-金:Tsara kokoa ny manolotra fanomezana ho an'ny firenena mpifanolo-bodirindrina noho ny manolotra ho an'ny andevo ao an-tanàna ihany. Sanganehana tanteraka raha nahare fa nanolotra fiara mpitatitra mpianatra lafovidy 200 [23 no isa marina] ho an'i Makedonia i Shina mba hanatsarana ny tontolon'ny fampianarana. Naniraka ny ambasadaorony ny governemanta mba hanolotra izany amin'ny fomba feno fanetre-tena, tahaka ny olona iray miboridana manome akanjo ho an'ny hafa na tahaka ny olona mahantra manome vola ho an'ny hafa. Tsy am-piheverana mihitsy izany. Raha manana fiara-pitatitra mamirapiratra marobe ianao, nahoana no tsy ampiana aloha ny mpianatra ao amin'ny firenena hoentinao. Raha tsy izany mba jereonao ireo mpianatra Sinoa mandray “fiaram-pitaterana” izay toy ny mitatitra biby fiompy. Mahamenatra ny ataonao! Manala-baraka tanteraka.
Na ilay mpanentana ao amin'ny fahitalavim-panjakana, Zhao Pu aza nanamarika fa fotoana tsy tokon'ny anavaon'ny governemanta fanomezana izao:
赵普:Firenena kely ao Eoropa i Makedonia, tsy manankarena izy. Na izany aza anefa, manana tombotsoa ara-tsosialy tsaratsara kokoa noho ny vahoaka sinoa. Tsara ny maneho firaisankina amin'ny fanomezana fiara mpitatitra mpianatra, efa ela isika no nanao zavatra tsy mahomby tahaka izao. Saingy iangaviako mba hijery tsara ny fotoana mahamety ary omeo lanjany ny fihetseham-pon'ny vahoaka? Aza avela hanozona antsika ny fahafatesan'ireo ankizy? Mbola kely izy ireo ka tsy mahalala ny teny “ratsy”.
Mba hampitoniana ny fahatezeram-bahoaka, nangataka ireo media mba hanaisotra ny vaovao misongadina ao amin'ny tranokalany ny Sampan-draharahan'ny Fampielezan-kevitra, saingy efa tara loatra izany. Han Zhiguo namaly toy izao:
韩志国:[Tsy voalaza hatrany ny marina rehefa misy ny lozam-piarakodia] Tsy mikasika ny isan'ny fiara mpitatitra mpianatra natolotra an'i Makedonia izany, fa ny fitantarana ny loza niseho: Ny ankizy any ivelany indray no mahazo fanampiana avy amin'ny ny governemanta Sinoa fa tsy ny ankizy ao amin'ny fireneny. Raha mbola ao anatin'ny ratram-po ny vahoaka, hadalana tanteraka ny fanomezana natao. Rehefa miatrika ny hatezeram-bahoaka anefa, mampiasa ny heriny indray ny manam-pahefana amin'ny alalan'ny famafana ny vaovao rehetra misongadina amin'ny aterineto. Amin'izao firoboroboan'ny valantserasera izao, ahoana indray ny fomba antenainy fa mbola afaka mamitaka ny vahoaka tahaka izao ihany izy?